27 Oct 2019 17 Jan 2020 Meegaal Ahmed
Waan fadhiyaa oo waad arkaysaa. Waxbaan dhegaysanayaa se, ma maqlaysid mana garaneysid waxa uu yahay. Waad is weydiin kartaa sida aan wax u dhegaysan karo aniga oo aan u ekeyn qof wax dhegaysanaya. Ha iga degdegin, ii kaadi. Maskaxdayda ayaan tiyaatarkii Hargeysa ka dhex furey. Aniga ayaa dhagax dhigay, dhisay oo xadhiga ka jaray. Bandhigii ugu horreeyeyna waa tan Khadra Daahir oo aan si gaara ugu soo casuumey codkeedii cajiibka ahaa masraxa la taagan ee ku luuqeynaysa heestii Yabaal. Mararka qaar waxaan is weydiinayay sida ay Khadri maskaxdayda uga dhex heesayso, way dhex deggan tahay malaha, oo sidey u gashay … Continue reading Hoolka Maskaxda
Soo Dhaweeyaay !
26 Oct 2019 5 Nov 2019 Meegaal Ahmed
Dharaarahan dambe ereyo aanu odhan jirin, horena aan looga maqal ayaa ka soo yeedha, ma ogi in afku ka xado iyo kale’e, dhagtaana waannu ka maqallaa taa kalena waanu ka sii daynaa. Wuu nala fadhiistaa balse hadal nagama guro, nagumana darsado. Muddo toddobaad ku siman ayay afkiisa ka soo burqanayeen “waar yaadaheen waynnu cirraysannay oo waynnu sii soconnaa!” cidi dhagay jalaq uma siiso oo iskuma dayno in aannu u fiirsanno hadalkiisa, balse isagu waxa uu uga dan leeyahay doobnimaynu xadhkaha goosannay oo naqaskaa inaga bataye ma dagnaa!, laakiin cid fahantaa ma jirto oo markuu sheekadaa keeno ayuun buu baabka siyaasaddu … Continue reading Soo Dhaweeyaay !
14 Sep 2019 17 Jan 2020 Meegaal Ahmed
Nolosha maalin laha ah ee reer miyigu ma laha is beddallo joogto ah sida magaalada. Aroorta hore marka la kaco ee la quraacdo, xoolaha ayaa la lisaa, dabeeto waa la foofiyaa. Berrina halkaa ayuun bey ka bilaabantaa iyada oo la marayo dariiqii shalay la maray. Sidaa ayay ku socotaa gebi ahaan ba noloshoodu. Illaa ay degaantoodaa abaari haleesho oo dad iyo xoolaba la waayo wax jidiinka lagu qooyo mooyee, kama guuraan halkaa ay reerka ka alkumaan. Mararka qaar way jiraan xaalado kale oo qasab ka dhiga in reerku u hayaamo kob kale. Dhanka haasaawaha, dadab galka iyo waxa laga bixinayo … Continue reading Reer Miyigeenna
Carrab ma koobaan
13 Sep 2019 Meegaal Ahmed
Cayn kastoo adduunkani Afar cidhif u leeyahay Daraf waliba cayn yahay Citibaaro badan yahay Calaf waa halkiisee Cal calyada nasiibkana Laga ceeshi karayoo Ninba qayb ka ciirsaday Qaar dayaxa calafsaday Iyo qaar cilmiga dhiga Inta caalim diintiyo Casharada quraankiyo Cilmigiisa dhigayiyo Abwaanada cawayskii Suugaanta curiyiyo Qorayaasha caankaa Cilmi baadhe oo idil Hooyaa calooshiyo Cadad buuxa uurkiyo Caanaha horaadkiyo Ku canqarisay naaskee Curuuqaha jidhkaagiyo Cududiyo laxaadkani Cidlo kamay abuurmine Cidaam hooyo dihatiyo Cudud ay ku curatiyo Waxa tahay cad laga jaray Caamahaan adduunyada Cillad lagama waayee Cidlo kaamay tagin Dharaaraha cartamayee Is cidhiidhiyaa wali Intay ciil ku galiyeen Cuqdad kugu abuureen … Continue reading Carrab ma koobaan
10 Sep 2019 12 Sep 2019 Meegaal Ahmed
Kaama muuqdo, lagaama dareemo, adna ma muujisid. Waayo waxaad ogtahay wixii aad ka soo martay. Halka aad joogto haddii lagu soo hadal qaado, waadiga fadhiga xammili waaya, ee ma baxdaa iyo ma joogtaa isku qabta. Ma jeclid in laga warramo, ma doontid ereyadiisa in meelahaa laga subciyo, oo qadhaadhkiisa ayaad dhadhamisay. Wixii aad kala soo kulantay markii aad dib u eegtay, waadiga Suugaan yahanad noqday ee maansooyin badan iyo heesooyin aan tiro lahayn ka curiyay. *** Habeenkii aad iiga sheekaysay in yar oo ka mid ah qisadaada, waan seexan kari waayay oo waxaan ka hurdi waayay dhibka dariiqa aad soo … Continue reading Jan-jeedh
Haadkii iyo xuuralceynta walaasheed
9 Sep 2019 12 Sep 2019 Meegaal Ahmed
Waa maalintii dhalinyarada Soomaalilaand, kuna beegan 20-kii February 1982-kii markii ay dhalinyaradii “UFO” shiidka iyo dhagax-tuurka kala hor tageen xukunkii millatariga ahaa ee Maxamed Siyaad Barre. Waa la xusayaa. Aniguna magaalada hargeysa oo aan joogo ayaan ka xusayaa. Waddada madaxtooyada hor marta illaa iyo taallada loo sameeyey xuska maalinta dhagax tuurka iyo dhalinyaradii “UFO”, ayaa loo kala socon doonaa. Dhalinyaro aad u badan ayaa waddada maraysa ciyaalo dugsi direyskii xidhani ha u badnaadeene. Sidoo kale xaflad ayaa ka qabsoomi doonta Ambassador hotel lagu waynaynayo maalintan mugga iyo miisaanka ku leh dhammaan shacabka reer Soomaalilaand. Xalay baan isku diyaariyay in aan … Continue reading Haadkii iyo xuuralceynta walaasheed
“Shamacii saddexda bilood shidnaa”
Waxa la marayaa labadii kun iyo lix iyo tobankii, dhaxamihiibaa soo dhaw, bil qudhaaba ka hadhay. Habeenadaas ayuunbaan jabsaday “Wiffi” guriga nagu xiga laga leeyahay, ilaahaybaa runta jecele dhawr jeer oo aan u tagay diidmo ayaan hadalkooda ka dareemayay, nin guriga gala balse aan ahayn ka iska leh oo aanu dhawr cesho masaajidka xaafadda ku wada tukannay ayaan is idhi hakuu galiyo khadka, isna wuu I meer meeriyay illaa afar cisho. Ka dibbaan jabsaday, khaladna kuma lihi. Habeen habeenada ka mid ah aniga oo mareegta facebook ku jira ayay inan/gabadh ila soo hadashay, anna waan u jawaabay in yar markaan … Continue reading “Shamacii saddexda bilood shidnaa”